मास्कोमा एटीएमबाट पैसा चोर्ने कोर्स संचालन, लाग्यो लुटेराको भिड ! « Sajha Page
मास्कोमा एटीएमबाट पैसा चोर्ने कोर्स संचालन, लाग्यो लुटेराको भिड !
एजेन्सी,अहिले अज्ञात समूहबाट जो-कोहीको पनि बैंकको खाताबाट पैसा चोरी हुने खतरा बढेको छ। अहिले प्राय जस्तो एटीएमबाट पैसा चोरी भएको समाचार आइराख्ने गर्छ। एटीएमबाट पैसा चोरी गर्ने गिरोह पक्राउ पर्ने गरेका समाचार पनि सन्चार मध्यममा आइराख्ने गरेकै छन्। एटीएमबाट पैसा चोर्ने कोर्सको बारेमा त सुन्नु भएको छैन होला। एक रूसी अखबारका अनुसार गत महिना, मास्कोमा एटीएम ह्याकिंग गरेर पैसा चिर्ने घटना बढेको समाचार सम्प्रेषण गरेको छ।
अघिल्लो वर्ष मात्रै एटीएम ह्याकिंगको २१ वटा घटना दर्ता भएकोमा यस वर्षको अप्रिलमा मात्रै यस प्रकारको १० वटा घटना दायर भएको जानकारी बाहिरिएको छ। मानिसहरुको बुझाउ अनुसार ती घटनाहरु प्राय सबै शिकारु ह्याकरहरुले गरिरेहेको बुझिएको छ। अनुभवी एटीएम चोरहरूअहिले मास्टर कोर्स संचालन गर्नमा व्यस्त रहेको जनाइएको छ। अहिले रुची हुने साथै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न चाहने व्यक्तिहरुले यस प्रकारको कोर्समा भाग लिएको समाचारहरु सम्प्रेषण हुने गरेका छन्।
समाचारका अनुसार चोरीमा चेलाहरु संलग्न रहेपनि कसको तरिका सिकेर चोरी भैरहेको भन्ने कुराको केहि अंश बाँकि रहने गर्दछ। कैस्परस्काई ल्याबका अनुसार ह्यकारहरुले अहिले ब्ल्याक बक्स तरिका अपनाईरहेको बुझाई छ। ह्यकारहरुसंग अहिले पनि मास्टर चाबी समेत रहन सक्ने आकलन गरिने गरिन्छ।